.....तपाईं यसलाई सजिलैसँग लिन सक्नुहुन्न भने यो तपाईंको समस्या हो ! मैले वास्तवमा ख्याल राख्दिनँ ...। ज्योति मगर -
…..तपाईं यसलाई सजिलैसँग लिन सक्नुहुन्न भने यो तपाईंको समस्या हो ! मैले वास्तवमा ख्याल राख्दिनँ …। ज्योति मगर
माघ १२, काठमाडौं –वर्तमान नेपाली सांगीतिक धरातलमा निकै उर्जावान गायिका तथा ज्योति मगरलाई लिन सकिन्छ । गायिका ज्योति मगर बेला बेला बिबा!दमा आईरहने गायिका हुन् तर गायिका मगर भने आफुले चाएको काम गर्न भने पछि हटदिनन । हिजोआज म्युजिक भीडीयोहरुका दृश्यहरु पनि चलचित्रका भन्दा कम छैनन् । केहि त्यस्ता म्युजिक भिडियो पनि नेपालि गित संगितको बजारमा एक पछी अर्को आई नै रहेका छन् । नेपाली चलचित्रहरुमा गरिने अङ्ग प्रदर्शनको बारेमा निकै पहिलादेखि नै चर्चा परिचर्चाहरु नचलेका भने होइनन् । त्यसो त ज्योति मगर एउटा त्यस्तो नाम हो जसको पछि फ्यान र ज्यानको कुनै कमि छैनन् । सामाजिक संजालदेखि स्टेज प्रोग्रामहरुसम्म उनलाई वाह वाह गर्नेको ओइरो नै लाग्ने गर्दछ । यस्तो हुनुमा मुख्यतया दुईवटा कुराहरु छन्, एउटा उनले विगतमा दिएका दृश्यहरु र अर्को उनले लागाउने पहिरनहरु, यिनै दुइवटा कारणहरुले नै ज्योति मगरको फ्यानहरुको ओइरो लाग्ने गरेको पाइन्छ ।
उनको शारीरिक प्रदर्शन गरेर नेपाली समाजको परिवेशको विरु,द्दमा गएर गरिने उनको प्रयोगले उनलाइ दीर्घकालीन रुपमा फाइदा भन्दा बेफाइदा नै बढी होला । दर्शक स्रोताहरुको मूल्यांकनअनुसार ज्योति मगरले त्यति न गर्दिउन भन्ने पक्क्कै हो तर समय परिवेश अनुसार आफ्नो प्रस्तुति र हाउभाउ दिन सक्ने गायिका तथा मोडल हुन् । हुन् त् हाम्रो समाजलाई स्वकार्य हुदैन । ज्योति मगर त् एउटा उदाहरण मात्र हुन् । ज्योति मगर भन्दा कम छैनन् अरु सेलिब्रिटी तर उनीहरुको त्यति चर्चा र बि,बाद भने कमै नै सुनिएका छन् । ज्योति मगरका यस्ता क्रियाकलाप पचाउन नसक्ने समाज एका तिर छ भने मगरलाई यसै सन्दर्भमा वाउ गर्ने समाज पनि यहि समाज भित्र बसिरहेका छन् । हुन् त् यो कुनै नयाँ र नौलो कुरा भने पटक्कै हैन । तर ज्योति मगर भन्ने बित्तिकै अ,श्लील र उश्रृं,खल शब्दको झ,टारो हान्ने गरेका छन् ।
हरेक व्यक्तिमा आफु खुसि स्वतन्त्रता भने हुने नै पर्छ । खाना खान जान्ने मान्छेले आफु खान खाना अन्दाज गरेर पकाउन जानेको हुन्छ यो धुर्वसत्या कुरा हो । समाज सामाजिक हिसाबले कतिपय यस्ता गतिबिधि त् न गरेकै राम्रो तर गरिहाले पनि यो बिषयलाई सिरोधर गरेर पहाड उचाल्नु पर्ने आश्यकता भने छैन । सूर्यलाई हत्केलाले छेक्छु भने झैँ हो । गायिका ज्योति मगर बेला बेलामा हाईहाई र बाई-बाईको सिरोधर गर्दै आएकी हुन्छिन तर गायिका मगर भने यसलाई सानो रुपमा लिएकी हुन्छन । कारण बस सामाजिक सञ्जाल र कोविडका कारण आफ्ना प्रस्तुति दिन नपाएकी मगर यतिका महिनासम्म भने गुमनाम नै बसेकी थिइन् । गायिका मगरको अत्तोपत्तो नै थिएँन । अझै भन्ने हो भने सायद दर्शक स्रोताले त्यति नजर अन्दाज भने गरेका थिएनन ।
गालि र तालीको प्रभाह नगर्ने ज्योति मगरले यति बेला सामाजिक सञ्जाल फेरी तताएकी छन् । गायिका तथा मोडल ज्योति मगरले फेसबूकमा आइतवार एउटा तस्वीर शेयर गरिन्, जुन तस्वीर अहिले भाईरल बनेको छ । ज्योति मगरले बस्र उचालेको बोल्ड तस्वीरहरू सार्वजनिक गर्दै स्टाटस लेखेकी छन ।“म सेक्सी हुन रोक्न सक्दिनँ । यो मेरो रगतमा छ । यदि यसलाई तपाईंले सहजै लिन सक्नुहुन्न भने यो तपाईंको समस्या हो । मलाई बाल मतलब….।
गायिका तथा मोडल ज्योति मगर बेला बेला बोल्ड तस्विर सार्वजानिक गर्ने र विवा!दमा आउने गर्छिन । खासै फरक भने ज्योति मगरलाई फरक भने पार्दैन । गायिका ज्योति मगरको उक्त् स्टाटसमा गालि र तालि उत्तिकै आएको छ । यो नौलो कुरा भने हैन । गायिका मगरले बिगतमा पनि यस प्रकारका फोटा न राखेका भने हैन । हाम्रो समाजका केहि पक्षलाई असहज भएता पनि गायिका तथा मोडल मगरलाई भने कुनै हिचकिचाहट छैन । बि!बाद चर्चा जे जस्तो भए पनि एउटा ठाउ गायिका मगरले ओगटी सकेको बेला यस्ता तस्विर सार्वजनिक नगर्दा पनि हुन्थ्यो कि ?
Previous बिना भट्टराई र मिन गुरुङको स्वरमा”सुन्तलाको फुल”सार्वजनिक(भिडियो)
Next सनम कठायत अभिनित उत्कृष्ट भिडियो”दोष”सार्वजनिक(भिडियो)